Otu n'ime ndị ahịa m weghaara weebụsaịtị ha na nnukwu nnabata nnabata. Ha emelitere ntọala ngalaba DNS ha na ngalaba maka ndekọ A na CNAME mana ọ na-esiri ha ike ikpebi ma saịtị ahụ ọ na-edozi akaụntụ nnabata ọhụụ (Adreesị IP ọhụrụ).
Adreesị IP ahụ nke sistemu mpaghara gị weghachite ma chekwaa abụghị naanị otu weebụsaịtị. Onye nwe ụlọ nwere ike ịnwe ọtụtụ ma ọ bụ ọbụlagodi ọtụtụ weebụsaịtị weghaara na otu Adreesị IP (nke bụkarị ihe nkesa ma ọ bụ nkesa na-akwadoghị) Yabụ, mgbe achọrọ ngalaba gị site na Adreesị IP, onye na-akwado gị zigara arịrịọ gị gaa na folda nchekwa ahụ dị n'ime ihe nkesa ma nyefee ibe gị.
Ọ bụrụ na imelite ntọala DNS na ngalaba na-edeba aha gị, mgbe ahụ ị ga-achọ ijide cache DNS gị wee chọọ ịme arịrịọ ahụ ọzọ. Ikpochapụ gị DNS cache na OSX:
Nwere ike ịnwalegharị ihe ping or nslookup iji hụ ma ngalaba ahụ na-edozi adreesị IP ọhụrụ n'oge a.
Site na ịgbaso usoro ndị a, enwere m ike ịchọpụta na ndenye DNS m na onye na-edeba aha na-aga n'ihu, ntinye DNS na thentanetị ga-adịkwa oge, nchekwa DNS nke Mac m ka ọ dị ugbu a, na DNS web host ahụ ruo ụbọchị… ọ dị mma ịga!